Guusha Somalia ee dhaqaalaha, Safarka R/wasaare Khayre iyo Kooxo Ay Naf ka Gooyo uga dhigan tahay [Faallo] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Guusha Somalia ee dhaqaalaha, Safarka R/wasaare Khayre iyo Kooxo Ay Naf ka Gooyo uga dhigan tahay [Faallo]
Apr 13, 2019 - 5 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) In kasta oo uu caalamku kala qaarado yahay, inkasta oo uu kala dalal iyo xuduudo yahay, hadana waxaa jira dano ka dhexeeya, kuwaas oo aan marnaba looga maarmin is-xulufaysi.
Soomaaliya waxay u dhaxaysaa Nidaamka caalamka ka hirgalay ee hanti-goosiga iyo Burjuwaasiyad hana-qaadday waayihii bur-burka:
Qaran-jabkii kaddib, waxaa abuurmay shirkado maxalli ah oo bulshadu aad ugu baahi qabtay. Shirkadahaas oo ka faa’iidaysanaya suuqa aan tartanka lahayn, ayaa la wareegay adeegyadii Dawladdu bixin jirtay, sida; isgaadhsiinta noocyadeeda kala duwan, korontada, biya galinta, bangiyada ama xawaaladaha IWM.
Waxaa kale oo fagaaraha ku soo biiray, kooxo Burjuwaasiyiin ah oo ka gacan-qabsaday maamulka Dawladda, Raggaas qaar ka mid ahi waxay ku jiraan Golaha Baarlamaanka. Halkaas ayay uga ololeeyaan danaha dhaqaale ee ay leeyihiin.
Kooxda hore, way ogolyihiin in Soomaaliya ay Dawladi ka hana-qaaddo, waxayse maare u layihiin ilaa imminka, sidii ay dib ugu qaabayn lahaayeen shirkadohooda, si ay ula jaanqaadaan nidaamka Dawliga ah.
Kolkii uu dhammaaday dagaalkii 2aad ee Adduunku, waxaa baahi wayn loo qabay in la helo qaabayn cusub oo lagu hago dhaqaalaha Caalamka, July 01, 1944-kii, dalka Maraykanka waxaa isugu yimi 44 dawladood oo umuurtaas lafa-guray, dabadeedna waxay ku heshiiyeen, in dal waliba lacag samaysto, lana xaddido qiimaha isku bedelka lacagaha ee sarrifka, si taas loo helo, waxaa la isla gartay in la sameeyo laba bangi oo caalami ah, IMF iyo Wold Bank. Deedna waxaa lacagihii lagu sargooyey dalwaliba inta uu dahab haysto, Maraykan ayaa kolkaas adduunka ugu dahab badnaa, Lacagtii maraykanka ee Doollar-ka ayaa la isla qaatay in lacagihii dalalka kale oo dhan lagu sicir-gooyo. Dalalka dhaqaale ahaan wareera, waxaa loogu tala-galay in Bangiga IMF uu lacag dayn ah siiyo. Dib-u-diska horumarkoodana waxaa maamulaya World Bank.
Soomaalidu intii ay dawladda ahayd, dhawr jeer ayay daymo ka qaadatay IMF, intii bur-burka lagu jirayna waxaa ku sii siyaaday dulsaar xoogleh. Maantana daynta Soomaaliya lagu leeyahay waxay ku dhowdahay 6-bilyan oo doolar. Waa culays xoog leh oo caqabad ku ah dib-u-soo kabashada dalka. Xilligan Soomaalidu waxay codsadeen in dayntaas laga cafiyo mar haddii aanay awoodin in ay iska bixiyaan!
1952-kii, ayaa dalal badan oo daymo ku lahaa dalka Arjantiin waxay ugu caalwaayeen in ay lacagtii ay daymiyeen dib uga helaan. Si aanay taasi dib ugu dhicin dalalkii daymaha bixin jiray waxay isugu yimaaddeen dalka Faransiiska waxayna aasaaseen golaha “Paris Club” oo xilligan 22 dawladood ka kooban. Paris Club, Waxay u xilsaarteen Bangiga IMF in uu daba gal ku sameeyo, dalalka daymaha lagu leeyahay.
Dawladaha dhaqaale ahaan fashilmay, ee codsada in daynta laga cafiyo waxaa lagama maarmaan ah in ay maraan shuruudo adag oo haddii ay ka gudbaan ay halmar laba arimood suura gal u wada noqonayaan. In dhaqaalaha dalkaasi soo kabto iyo in dayntii laga cafiyo.
Shuruudahaas waxaa ka mid ah: Waa in la joojiyaa musuqmaasuqa. In aadan kharash garayn lacag aan ku soo gaadhin. In la hufo qaabka qandaraasyada Dawladdu u bixinayso. In si cad loola socon karo kharash-garaynta Maaliyadda Dawladda.
Shuruudahaas badiba dawladda Soomaaliya way ka soo baxday, walina waxay madaxda qaranku dadaal ugu jiraan sidii ay u dhammaystiri lahaayeen shuruudaha dhimman.
Sida ay qabaan dhaqaalayahanku, waxa aad muhiim u ah in dadaalka hufnaanta maaliyadda lagu bar-bar wado dadaal kale oo lagu xoojinayo olole siyaasi ah oo laga dhex fusho dawladaha go’aanka tooska ah ku leh barnaamijka dayn cafinta. Taas oo aan ku mala waynahay in xilligan uun Soomaalidu ay diyaar u tahay in ay bilowdo.
Wafti balaadhan oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khaye oo ay ka mid yihiin Wasiirada Maaliyadda iyo Qorshaynta Qaranka ayaa Maraynkanka kula kulmay madaxda IMF iyo World Bank, sidoo kale wuxuu wafdigu u ololeeyey barnaamijka dayn-cafinta.
Ugu dambayn Dhibaatooyinka hortaagan taabba galka Barnaamijkan waxaa ugu xoog-wayn Kooxo Burjuwaasiyiin ah oo dantoodu ku jirto in aan Soomaaliya daynta laga cafiyin. Waxay aad uga dagaallamayaan in aan dalka lacag cusub loo daabicin. Waxay hor is taagaan miisaaniyad sanadeedka dawladda. Waxay ku dadaalaan in Bangiga dhexe ee Soomaaliya aanu mar kale dib u shaqayn. Waxay dawladda ku cadaadiyaan in ay ka helaan qandaraasyo sad-bursi ah. Waxay buun-buuniyaan falalka is-miidaaminta ah ee argagixisadu fuliso iyaga oo u muujinaya Xamar in ay tahay magaalo aan amni ahayn! Intaas oo dhan waxay ku doonayaan in dalka iyo dadkuba ay u cuna duubmaan!!!
Abdirashid Mohamed Hashi
Khayre iyo Tuuga Bayle oo hantidii dalka dhacaya oo millions dolar dhacay, waa in Mooryaanta Xamar iska oo kasii liita dalka cayriyaan..
Waxaa kaaga daran maanta wuxuu Khayre saxiixay Somalia in dayn ku qaatado lacagta la siiyo Amisom iyo ciidanka maraykanka oo drones ku laynaya shacabka Somaliyeed.
Macnaha bixi mushaarkiisa kii maatadaada laynayey.
Walle ey baa Somalia madax u ah waxaana ku nool ey kale oo daanyeer ah.
Aan ooyee albaaba ii xira..😢😰
Shalay waxaan meel ka daawanayey Bayle oo hotelka ugu ka dhistay Hargeysa…..Yaab!!!!!!!!
Khayre ka waran hee inta dhacay ama Farmaajo daanyeer asaga loo sheega xoogaaga meel loo dhigay iyo kontada looga shubay numberkeeda Dubai ku taalo.
Shaqo kale ma qabto ii fadhi ahayn Farmaajo…
Wadankii Mooryaan, Ugus, tuugo qurbo ka timid iyo cadow gaalo ah ayaa isugu tegey….
Waxaan xalay ka seexan waayey Somalida oo deyn haku qaatado la yiri ”amniga loo sugayo” waaba kuwa diidan in xor noqo oo ah Amisom iyo US army in mushaarkooda iyo ciidanka Maraykanka oo drones ku dila Somalida yaanyada beeranaya…… Yaab.
Khayre saxiix qalinka kusoo boodayaa oo oranayn maxaan saxiixayaa…?
Anagoo ciidankeena lacag u ahayn sidee beri deyn dulsaar la socdo mushaar ugu bixinaa ciidan Ameican yo Amisom.
Ma oran waayey, lacag ma haynee ku noqda dalalkiina, daanyeer Khayre.
Waaba cadowgaagii dayn ribo la socoto ku biil. Yaabka aduunka!!!
Aduunkaan hadaad sii joogto geel dhalaaya xitaa waa arkee!!!😳
Somalia is dead country👎😟
Fucking afarqooble Khayre iyo Daanyeerka hurda Farmaajo.
LAND OFF PUNLAND NINKA WATOOW REER PUNLAND HADAAD TAHAY INAAD SHIKA LA TIMAADO SHEKADII QARANDUMIS NIMADA SNM BESHA ISAAQ OO WARAR BEEN ABUUR IYO HUU HAA KUWADA WASIIR KA ARIMAHA MALIYADA SOMALIYA BAYLE OO MASEER IYO XUMAAN AY LEEYIHIIN WAA DADAALAYAA OO SOMALI BUU RABAA INAY SOONOQOTO DAWLADEEDII INTAAS NA MA RABAAN CADOWGA GUDAHA IYO KAN DEBEDUBA CADOWGA GUDAH HA NOQON OO DOQON UFIIRSO BADAN HANOQON BROTHER NIMANKAAS WAA DADAALAYAAN ILAAHAY NA HALAQABTO BROTHER XAMAR OO XISAAB ADAG RABTAA HORTAAL
MA ADAA FAHMAYBA!!!.
WAY TAGTOO WAX LAMA TEGIN.
WAY TIMIDOO WAX LAMA IMAN.
W A X B A Y A H A Y!!!!.